बिमान उ’ड्नु अ’गाडी खि’चेको त’स्बिरले सं’सार रु’वायो…एकै परिवारका ५ जनाको मृ*त्यु ! – AB Sansar
बिमान उ’ड्नु अ’गाडी खि’चेको त’स्बिरले सं’सार रु’वायो…एकै परिवारका ५ जनाको मृ*त्यु !
January 11, 2021 January 11, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on बिमान उ’ड्नु अ’गाडी खि’चेको त’स्बिरले सं’सार रु’वायो…एकै परिवारका ५ जनाको मृ*त्यु !
काठमाडौं। इण्डोनेशियामा श्रीविजय एयरको विमान दु:र्घ:ट’नामा परेको एक परिवारले वि मान उ ड्नु ठि क अघि सामाजिक संजालमा गरेको पोस्टले त्यो परिवारको दुःखद नियतिको खु लासा गरे को छ । उनी हरुलाई नि यतिले ता नेर मृ*त्युको मुखमा पुर्याएको पाइएको छ । राती विन्डानिया नामकी एक महिलाले विमानको सिटमा ब सेर आ फ्ना तीन छोराछोरीसँगै खि चेको से ल्फी सा र्वजनिक भएपछि उनीहरुको दुखद नियतिको खुलासा भएको हो । उनले त स्वीर पोस्ट गर्दै आफूहरु घर जान लागेको उल्लेख गरेकी थिइन् । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला”******
उनका दाजु इरफान्स्याह रि यान्तोले पनि परिवारको फो टो पो स्ट गर्दै उनीहरुको लागि प्रार्थना गर्न भनेका थिए । इरफान्स्याहका अनुसार उनको परिवारले खासमा अर्कै विमानबाट यात्रा गर्ने तय थियो तर अन्तिम समयमा उनीहरुले उडान परिवर्तन गरे । डेलीमेलको रिपोर्ट अनुसार शनिबार आत्तिँदै जा कार्ताको सोएकार्नो हात्ता विमानस्थल पुगेका इर फान्स्या हले आ इतबारसम्म पनि आ फ्नी बहिनी र अभिभावक सहित परिवारका ५ जनाको बारेमा शुभ खबरको आशा गरिरहेका थिए । ‘हामी शक्तिहीन महसुस गरिरहेका छौं । हामी केवल पर्खन र छिटै कुनै सूचना पाउने आशा गर्न सक्छौं’ इरफान्स्याहले संवाददाताहरुसँग भने ।
उनका अनुसार उनको परिवारले चाँडैको उडानमा घर जाने योजना थियो । त्यो जहाज श्रीविजयले नै संचालन गरिएको नाम एयरको उडान थियो । तर, उनीहरुले किन उडान परिवर्तन गरे भन्ने विषयमा उनी आफैं अनपिभत्र छन् । उनकी बहिनी र उनका छोराछोरी तीन हप्ताको विदाको समय सकेर पश्चिम कालिमान्तान द्वीपमा रहेको पोन्तियानाकस्थित आफ्नो घर जाँदै थिए । ‘उनीहरुलाई विमानस्थल सम्म गाडीमा मैले नै लगेको थिएँ, चेक इन र लगेजको लागि पनि सहयोग गरेकको थिएँ । यस्तो लागिरहेको छ, म अझै यसलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । यो निकै छिटो भयो’ इरफान्स्याहले भने ।
सिद्धार्थ शुक्लाको त्यो अन्तिम ‘पोस्ट’
September 2, 2021 September 2, 2021 Ab-संसार